Arsenal Oo Lasoo Wareegeysa Weeraryahanka Kooxda Fiorentina – Garsoore Sports
Arsenal Oo Lasoo…
Majaladda Corriere Fiorentino (oo laga soo xigtay Sport Witness) ayaa horraantii todobaadkan soo warisay in Arsenal ay kamid tahay kooxaha isku dayaya inay laso saxiixdaa. weeraryahanka kooxda Fiorentina ee Dusan Vlahovic xagaagan.
Balse wariyaha caanka ah ee arrimaha suuqa ku xeel-dheer ee Fabrizio Romano ayaa ka hadlay arrintaas isagoo carabka ku dhuftay in kooxo badan ay xiiseeynayaan xiddigan balse Arsenal ay qorsheyneeyso inay lasoo saxiixato xagaagan.
21 jirkaan weerarka ugu cayaara kooxda Talyaaniga ka dhisan ayaa ku jira xilli ciyaareed kala-bax ah, isagoo in ka badan laba jibaaraya goolashiisii 2019/20 ee sagaal gool tartamada oo dhan si uu 21 gool uga dhaliyo 39 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan.
Goolashaas kuma filneyn inay Fiorentina ku riixaan miiska kala sarreynta, maadaama ay fadhiyaan kaalinta 13aad iyagoo kaliya 7 dhibcood ka sarreeya aagga dib u dhaca ayaa aadaya kulanka ugu dambeeya ee horyaalka Talyaaniga.
Waxaa runtii muuqata sabab fahmi kartaa ee Vlahovic uu ugu fikirayo inuu ka dhaqaaqo kooxda, laakiin xitaa si cad uma cadda in Arsenal ay suuqa ugu jirto gabi ahaanba weeraryahan, iskaba daa Vlahovic si gaar ah.
Taasi waxay keliya u badantahay inay marka horre ka shaqeeyaan iib-geynta qaar kamid ah xiddigahooda haatan si ay u helaan adeega da’yarkan tayada sarre leh.
Alexander Lacazette iyo Eddie Nketiah ayaa labadoodaba bilihii ugu dambeeyay lala xiirinayay inay ka tagayaan kooxda Arsena taasina waxay sii xoojin kartaa wararka kale ee le xiriirinaya weeraryahanada sida Vlahovic.
PSG Ma’aha – Lille Ayaa Ku Guulleeystay Horyaalka Ligue 1